26-sano jir ah ayaa noqonaya kabtanka airline yaraa UK ee
Su'aal 26-sano jir ah ayaa noqonaya kabtanka airline yaraa UK ee
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #271 by Colonelwing
Waxaan u lahaa in la sameeyo NEWS this tusay on halkan for our Duuliyayaasha waxay jeelka mustaqbalka ee tomorow
sida exemple ah in aaminsanyahay in aad naftaada iyo in la raaco aad riyo.
Kate McWilliams uu noqday kabtanka airline yaraa UK 's at 26. Waxay bilaabeen duulaya at da'da 13 oo hadda u shaqeeya Easyjet. Report by Sarah Duffy.
sanado badan aad u doonaya galay mustaqbalkiisa dareen sida CPT iyo qaar ka mid ah baadhitaano caafimaad oo qaab TOP for periode waqti nolol
si ay u sii duulaya sano sida badan in ay yimaadaan. Haa runtii, CAAFIMAAD waa hanti aad u muhiim ah si ay u noqdaan kooxda xooga Pilot ah
si is ogow fiican ee caafimaadkaaga haddii aad rabto in aad raacdo wadada in aad noloshaada.
Gentelmen, ma waxaad u xusuustaa markii aad qaadatay Shaqadiisa ugu horaysa ayaa Captain ,,, sida aan maalintaas la halmaami karin eh!
sano 2 3 bilood ka hor #287 by Gh0stRider203
iyada cute ^ _ ^